पैगम्बर मुहम्मद (स.) को जीवन एक नमूना
शुभ जन्म (Birth)
,,तपाई,, मक्का शहरको बनुहाशिम नामक घाटीमा बसन्त ऋतुमा जन्मिनु भयो । र, यो सोमबरको दिन बिहीनको समय थियो । त्यो दिन 9
रबिउल अव्वल थियो र यो पनि भनिन्छ कि त्यो दिन 12 तारीख थियो । वर्ष त्यही थियो जसमा अबराहाले मक्कामाथि आक्रमण गरेको थियो । उसले
साथमा हात्ति पनि ल्याएको थियो र अरबीमा हात्तीलाई ,,फील,, भनिन्छ । यस कारणले यस वर्षको नाम ,आमुलफील, पर्न गयो । त्यो दिन अप्रिल
22 तारीख 571 ई. थियो ।
जन्मको समयमा सुडिनीको काम ,,औफ रजि.,, का पुत्र अब्दुर्रहमान की आमा अर्थात अम्रुकी छोरी शिफाले गरिन् ।
जब तपाईं पैदा हुनु भयो तब तपाईं की माता को शरीरबाट एक ज्योति निस्कियो जसले सिरीया देशको महल प्रकाशनमा भयो । अनि
माताले अब्दुल मुत्तलिबकहाँ तपाईंको शुभ जन्मको सुसमाचार पठाउनु भयो । उहाँ हर्षकासाथ आउनु भयो र तपाईंलाई कावामा लगेर अल्लाह
तआला संग ,दुआ, गर्नु भयो यस आशाका साथ कि तपाईंको प्रशंसा हुनेछ, तपाईंको नाम मुहम्मद राख्नुभयो । अनि अरबी चलन अनुसार सातौं
दिन ,अकीका, र ,खत्ना, गराउनु भयो । मानिसहरुलाई निम्तो दिनुभयो ।
तपाईंलाई तपाईंको पिताका दासी (लौण्डी) आइमनकी आमाले काखमा खेलाउने गर्थिन् । उनी हब्शी थिइन् र उनको नाम ,बरकत, थियो ।
अल्लाहले उनीमाथी ठूलो उपकार गरे । उनीले तपाईंको जमाना पाइन् । इस्लाम कबूल गरिन् क ,हिजरत, पनि गरिन् । अनि तपाईंको देहावसानको
5-6 महीना पछि आफ्नो इहलीला समाप्त गरिन् ।
रेजाअत (दूध पिलाउने)
तपाईंको मातापछि सबभन्दा पहिले अबू लहब की दास थुवैबाले तपाईंलाई दूध खुवाइन् । त्यति बेला उनको आफ्नो बच्चा जसले दूध
पिइरहेको थियो, को नाम ,मसरुह,थियो । थुवैबाले तपाईंभन्दा पहिला अब्दुल मुत्तलिबका पुत्र हम्जा र तपाई पछि अबु सल्मा बिन् अब्दुल असद्
मख्जूमीका पुत्र अबु सल्मालाई पनि दूध खुवाएकी थिइन् । अर्थात् यी तीनै तपाईंको दूधे भाइ भए ।
हलीमा सआदियाको काखमा
अरबका शहरीयाहरुको चलन थियो कि आफ्नो बच्चालाई शहरी रोगबाट बचाउनका लागि उनीहरुलाई दूध खुवाउने जनजाति (बदवी)
महिलाहरुलाई सुपुर्द गरिदिने गर्दथे ताकि उनीहरुको शरीर मजबूत र उनीहरुका षअरबी भाषा, शुद्ध र ठोस बनोस् । यसै चलन अनुसार अब्दुल
मुत्तलिबलाई पनि दूध चुसाउने धाईआमाको खोजी थियो । उता हवाजनका पुत्र बक्रः बक्रः का पुत्र सअदको वंशका केही आइमाइहरु यसै उद्देश्यले
मक्का आए र उनीहरुका अगाडि बालक मुहम्मदलाई पनि पेश गरियो । तर, जब उनीहरुलाई यो थाहा हुन्थ्यो कि तपाईं ,टुहुरो, हुनुहुन्छ तब
उनीहरुले तपाईंलाई जिम्मा लिन अस्वीकार गर्दथे ।
एक महिला ,हलीमा, जो अबू जोवैबकी छोरी थिइन्, लाई कुनै बच्चा प्राप्त भएन । यसर्थ उनले विवश भएर तपाईंलाई नै लिइन् । तर जब
तपाईंलाई लिइन् तब उनको सौभाग्यको यस्तो ढोका खुल्यो कि संसार आश्चर्यचकित भयो । यसको एक झलक तल वर्णन गरिन्छ ।
हजरत हलीमाको पिता अबू जुवैबको नाम अब्दुल्लाह बिन हारिस थियो । उ तपाईं स. का दूधे हजुरबा हुन् । हलीमाको पतिको नाम हारिस
बिन अब्दुल उज्जा थियो । यी दुबै कबीला सअद बिन बक्रः बिन हवाजिनसँग समबन्ध राख्दथे । हारिसका छोरा छोरीहरु जो तपाईंको दूधे भाइ-
बहिनी हुन्, तिनका नाम यस प्रकार छन्- अब्दुल्लाह, अनीसा र जुदामा यिनको उपनाम ,शीमा, खियो । पछि उनी तुल्नात्मक हिसाबले अग्ली थिइन्
र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई काखमा खेलाउने गर्दाथिन् ।
हलीमाको घरमा बरकत नै बरकत
जस्तो कि माथि नै संकेत गरिएको छ कि जब सम्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम हलीमाको घरमा रहनु भयो, उनको घर बरकत
(अभिबृद्धि) ले मालामाल रह्यो । हलीमाको बयान छ कि जब उनी मक्का आएकिथिइन् तब खडेरीको जमाना थियो । उनीसंग एक ,गधा, थियो जो
यस प्रकार कमजोर र दुब्लो थियो कि पुरा ,काफ्ला, मा सब भन्दा ढिलो हिड्दथ्यो । एक ,ऊँटनी, पनि थिइन् । तर त्यसले एक थोपा पनि दूध
दिंदैनथिन् । हलीमाको आफ्नो बच्चा भोकको छट्पटाइले पुरा रात रुने कराउने गर्दथ्यो, न स्वंय सुत्थ्यो, न आमा बुबालाई सुत्न दिन्थ्यो ।
जब उनले बालक मुहम्मद सल्लल्लाहु इअलैहि वसल्लम लाई लिएर आफ्नो डेरामा आइन् र काखमा राखिन् तब स्तन दूधले भरियो ।
तपाईंले पेटभरी पिउनुभयो र तपाईंको साथै हलामाको बच्चाले पनि धितमारी पियो, अनि दुबै आरामका साथ सुते ।
उता पति उठेर ऊँटनीनिर गएपछि देख्दछन् कि थनबाट दूध टप्कनै आँटेको छ । तसर्थ उनले यसप्रकार दूध दूहे कि दुबैले खुबै अघाएर
पिए र एकदमै आरामलेको रात गुजारे ।
मक्काबाट फिर्तीमा ,हलीमा, यसै कम्जोर गधामा सवार भइन् र आफ्नो साथमा बालक मुहम्मदलाई पनि लिइन् । तर यति बेला त्यही गधा यसरी तेज
हिंड्यो कि पुरै काफ्लालाई उछिनेर अगाडि निस्क्यो र कुनै गधा उसको रफ्तारको सामना गर्न सकेन ।
हजरत हलीमाको बसाइ क्षेत्र ,बनू सआद, सबभन्दा बढी सुखा र खडेरी लाग्ने इलाका थियो । तर त्यसको बावजूद पनि मक्काबाट फिर्ता
आएपछि उनको यो हालत भयो कि जब बाख्रीहरु चरेर आँउदथे तब तिनीहरुको भुँडी टन्न भरिएको हुन्थ्यो र थून पनि दूधले भरिएका हुन्थे । पति-
पत्नीखूब दूध दुहुँदथे र पिउँदथे । जबकि कुनै अन्य मानिसलाई दूधको एक थोपाको पनि सौभाग्य प्राप्त हुन्थेन ।
यसरी यस परिवीरलाई निरन्तर लाभ र अभिबृद्धि (बरकत) प्राप्त भइह्यो । यहाँसम्म कि दुई साल बितीसक्यो र ,दूध पिलाउने, अवधि
(रेजाअत) समाप्त भयो । यसर्थ माता हलीमाले तपाईंको ,दूध, छुटाइदिइन् । यस अवधिमा तपाईं हृष्टपुष्ट र तागतिलो भइसक्नु भएको थियो ।
अझै थप अवधिसम्म माता हलीमाका साथ
माता हलीमाको परम्परा नै भइसकेको थियो कि उनले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई हरेक6महिनापछि मक्का ल्याउँथिन् । माता र
परिवारका सदस्यहरुसंग भेट गराउँथिन् । अनि आफ्नो बासस्थान ,बनू सआद, फिर्ता लग्थिन् । जब ,रेजाअत, अर्थात दूधे बालकलाई दूध चुसाउने
अवधि समाप्त भयो र दूध छोडाएर तपाईंलाई तपाईंको माता कहाँ ल्याइन् तब अझसम्म जुन लाभ र बरकत देखिसकेकि थिइन् त्यसलाई ध्यानमा
राखेर उनी चाहन्थिन् कि तपाईंलाई उनीसंग रहन दिइयोस् । तसर्थ उनले तपाईंको मातासित अनुरोध दिइयोस् ताकि ऊ अझ हृष्टपुष्ट होओस् । यस
कारणले कि मक्काको महामारीबाट डर लाग्दछ, माता उनीसंग राजी भएन् । हलीमा हर्षले गद्गगद् भई तपाईंलाई लिएर आफ्नो घर फिर्ता भइन् ।
लगभग थप दुई वर्षसम्म त्यहीं उहांकोबसाई रह्यो । अनि तपाईंको
मालिकका पुत्र अनस रजियल्लाहु अन्हुको कथन छ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम् बच्चाहरुका साथ खेलिरहनु भएको थियो कि हजरत
जिब्ईल अलैहिस्सलाम आए र तपाईंलाई सुताएर (पल्टाएर) छाती (बक्षस्थल) चिरिदिए । अनि तपाईंको मुटु निकाले र त्यसबाट एक चोक्टा
निकालेर भने कि यो तिमीमा शैतानको हिस्सा (भाग) हो । अनि मुटुलाई सुनको थालमा जमजमको पानीले धोएर जोडिदिए र त्यसै ठाउँमा
पल्टाइदिए । उता बच्चाहरु दौड्दै तपाईंको माता अर्थात् धाइआमाकहाँ पुगे र भन्न थाले कि मुहम्मदको हत्या गरिदियो । उनीहरु तुरुन्त गई हेरे-
मुहम्मदको अनुहार उदास थियो । हजरत अनसको कथन छ ,, मैले तपाईंको छातीमाथि सिलाइको असर देख्ने गर्दथे,, ।
प्रतिलिपि हाम्रो सौगात 2055 बाट
सफरको महीना (अपशकुन) किन ?
इस्लाम भन्दा पहिले अरबवासी यी चार महीनालाई आदर सम्मान गर्दथे र त्यस अनुसार अनुसरण गर्ने प्रयास पनि गर्दथे तर आफ्नो आर्थिक स्वार्थको लागि मुहर्रमको महीनालाई सफरको महीनासँग बदली गर्दथे र कहिले सफरको स्थानमा मुहर्रम महीनासँग परिवर्तन गर्दथे।
इस्लामिक महीना मध्ये एक महिनाको नाम हो सफर । जुन अरबीको महीना अनुसार दोश्रो महिनामा पर्छ । यस महीनालाई सफर यसैले भन्दछन् कि इस्लाम भन्दा पहिले अरबीयनहरु एक समूदायले अर्को समुदायमा आक्रमण गर्ने, काटमार गर्ने, अर्काको माल लूटेर लिन्थे र कसैले कसैलाई पनि लुट्न मार गर्न किञ्चित पनि पछि पर्दैनथे, यसैले यस महीनालाई सफर भनिन्छ र अरबवासिहरु यस महीनामा दुईवटा ठूलो अपराधमा ग्रस्त थिए।
Read more: सफरको महीना (अपशकुन) किन ?
सबै रसूलहरु (Prophets) ले देखाएको मार्ग एउटै हो। सबै रसूल तथा नबीले एकेश्वरवादको सन्देश दिन्थे । अल्लाहले यस धर्तिमा मानव जाति मध्येबाट असल चरित्र भएका व्यक्तिलाई ईश-दूत छनौट गर्नु हुन्थ्यो । उनीहरुमा ईश्वरिय शक्ति हुँदैनथ्यो, तिनीहरु सामान्य मानव जस्तै हुन्थे । तिनै नबी तथा रसूलले सिकाएको तरिका अनुसार अल्लाहको भक्ति गर्नु नै मुक्ति मिल्नेछ । सृष्टिकर्ताले सृष्टि गरिएको चीजको उपासना गर्ने होइन र मानव निर्मित चिज (मूर्ति र फोटो) लाई उपासना गर्ने होइन । जब बच्चा जन्मिन्छ उ ईश्वरिय आदेश र नियमानुसार जन्मिएको हुन्छ साथै उसले त्यही नियमको पालना गरेको हुन्छ जुन ईश्वरबाट निर्देशित हुन्छ । पछि उसका आमा बुबाले जुन धर्म मानेको हुन्छ त्यही सिक्दै जान्छ र त्यही धर्मको पालन गर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा हदिसमा नबी सल्ल.ले भन्नुभयोः “हरेक जन्मलिने बच्चा आफ्नो प्राकृतिक ईश्वरिय धर्ममा जन्मिन्छ, फेरी उसको आमा बुबाले उसलाई, यहुदी, नसरानी या माजुसी (ग्रह तथा नक्षत्रको पूजा गर्ने व्यक्ति भनिन्छ) बनाउँछन्।” (बुखारी र मुस्लिम)
Read more: सबै रसूलहरु (Prophets) ले देखाएको मार्ग एउटै हो ।
सात महापाप के के हुन् ?
शिर्क तौहीदको ठिक उल्टो हो, अल्लाहको उसको कुनै सिफत(बिशेषता)मा कुनै पनि दर्जामा अल्लाह बाहेक कुनै अरुलाई हरेक प्रकारको पूजा तथा इबादतमा समानता दिनु हो । कुरआनमा अल्लाहको कथन छ-
“जो अल्लाहको साथ शिर्क गर्दछ अल्लाहले उसलाई जन्नत (स्वर्ग) अवैध गरेको छ र उसको ठेगाना जहन्नम हो।” (सूर माइदा, आयत नं. 72)
शिर्क अल्लाहको लागि सबैभन्दा ठूलो महापाप हो । यि महापापहरुको बारेमा तल बयान गरिने छ । शिर्क तीन प्रकारको हुन्छ । शिर्क अकबर, शिर्क अस्गर, शिर्क खफी । यस मध्ये शिर्क अकबर सबै भन्दा ठूलो महापाप मध्ये पर्दछ जसको कारण मानिस जहन्नम (नर्क) मा जानेछ । त्यस्तै अरु पनि यस्ता महापाप छन् जसले गर्दा मानवलाई बर्बाद गरी नर्क तर्फ धकेल्छ ।
अब म तपाई समक्ष सात महापापको बारेमा इनशाअल्लाह जे जति तत्वदर्शिताले भ्याएसम्म जानकारी गराउने कोशिस गर्दछु ।
Read more: सात महापाप के के हुन् ?
संवैधानिक कानून कुरआनमा
संवैधानिक कानून कुरआनमा के छ त ? आफ्नो देशको शासक कस्तो हुनुपर्छ ? देशको शासक गतिलो भए के फाइदा हुन्छ ? देशको शासक किन ईशभय राख्ने खालको हुनुपर्छ ? यिनै विषयलाई समेटेर पवित्र कुरआनबाट केही आयतहरु तपाई पाठकहरुलाई जानकारी गराउने कोशिस गर्दछु ।
राजा या राष्ट्रपति देशको देशको पहिलो प्रमुख जिम्मेवार पद हो त्यसपछि प्रधानमन्त्री देशको दोश्रो प्रमुख पद हो । मुस्लिमहरुलाई आफ्नो नेता, अगुवा वा जिम्मेवार यस्तो व्यक्तिहरुलाई बनाउनुपर्छ, जुन उनीहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै ईश भय राख्ने, धेरै शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव राख्दछ । इसराईलका सन्तानहरुका मौलिक वा ठूला खराबीहरुमध्ये एउटा के थियो भने तिनीहरुले आफ्नो अवनतिकालमा अमानतहरु अर्थात दायित्वका पद, धार्मिक नेतृत्व तथा समाजको अधिकारको पद अयोग्य, अनुदार, दुराचारी, विश्वासघाती तथा दुष्कर्मी व्यक्तिहरुलाई दिने गर्थे । दुष्कर्मीहरुको नेतृत्वले गर्दा पूरा समाज विकृती र विध्वंसको शिकार भएको थियो । यहाँ आस्थावानहरुलाई त्यस्तो नगर्ने आदेश दिइएको छ । इसराईलीहरुको दोश्रो ठूलो खराबी के थियो भने तिनीहरुले न्यायलाई छोडिदिएका थिए र पूर्णरुपले हठधर्मी भइसकेका थिए । तसर्थ यहाँ आस्थावानहरुलाई अन्याय नगर्ने र हरेक अवस्थामा निसाफको कुरा गर्ने आदेश दिइएको छ ।
Read more: संवैधानिक कानून कुरआनमा
इस्लाम भन्दा पहिले अरबवासी यी चार महीनालाई आदर सम्मान गर्दथे र त्यस अनुसार अनुसरण गर्ने प्रयास पनि गर्दथे तर आफ्नो आर्थिक स्वार्थको लागि मुहर्रमको
महीनालाई सफरको महीनासँग बदली गर्दथे र कहिले सफरको स्थानमा मुहर्रम महीनासँग परिवर्तन गर्दथे।